Tilmaamaha Safarka Sharm-el-Sheikh ee Xalaal - Makhaayadaha - Masaajiddada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Sharm el-Sheikh oo caan ku ah magaca "Sharm" waa deked caan ah iyo magaalo dalxiis oo ku taal cirifka koonfureed ee Sinai Peninsula ee dalka Masar, oo caan ku ah dadka sameeya fasaxyada xirmooyinka iyo noocyo kala duwan.
Sharm el-Sheikh waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan dalxiis ee dunida carabta. Laakiin sidoo kale waxaa jira sababo aad u wanaagsan oo loo booqdo haddii aadan ahayn dalxiiska guud, ee jecel inuu jiifo xeebta maalinta oo dhan. Waxay ka mid tahay baraha ugu wanaagsan adduunka iyo safarka lamadegaanka waa bayaan lama iloobaan ah.
Jasiiradda Sinai waa buuro fog oo lamadegaanka ku yaal. Buuraha dhagaxa leh waxaa laga kala soocaa badda buluugga ah ee buluugga ah iyadoo loo maro marin lama degaan ah oo fidsan. Isku darka lamadegaanka iyo bada waa muuqaal layaableh oo kaa dhigaya inaad aamminsan tahay inaad ku sugan tahay meeraha kale.
Sharm el-Sheikh wuxuu ahaan jiray wax aan ahayn tuulo yar oo kalluumeysi oo ay ku noolyihiin ilaa 100 muwaadin reer Baadiye ah. Markii Sinai ay qabsatay Israel 1967, Sharm el-Sheikh wuxuu bilaabay inuu u horumariyo sidii meel dalxiis (sida jasiiradaha kale). Israa’iiliyiintu waxay ka guureen Siinaay intii u dhaxeysay 1979 iyo 1982 ka dib markii la saxiixay heshiiska nabadeed ee labada dal. Laga soo bilaabo 1980-yadii, Masaaridu waxay sii wadeen horumarka magaalada Sharm halkaasoo ay Israa’iil kaga tagtay. Boqolkii Sharm wuxuu koray dad tiradoodu gaadhayso 100 oo qof. Hadda waxaa jira socod wanaagsan, Hard Rock Cafe, mid ka mid ah isbitaalada ugu casrisan Masar iyo wixii la mid ah.
Cimilada ayaa ah mid aad u qalalan. Roobabku aad ayey u yar yihiin. Cimiladu waa mid aad u kulul maalmaha xagaaga iyo dhexdhexaad dhexdhexaad ah xagaaga xagaaga. Xilliga jiilaalka, waa diirimaad maalmo oo waxay leedahay mid ka mid ah heerkulka habeenkii ugu diiran Masar.
Waqtiga ugu raaxada badan ee la booqdo Sharm El-Sheikh waa dhammaadka xagaaga iyo bilowga dayrta. Tusaale ahaan bisha Sebtember heerkulka hawadu waa 34 ° C biyahana waa qiyaastii 29 ° C.
Na'ama Bay qaybteeda magaalada waa xarunta nolosha iyo cawayska: inta badan naadiyada Sharm, makhaayadaha, makhaayadaha iyo dukaamada ayaa halkan ku yaal. Na'ama Bay waxay ku taal bartamaha inta udhaxeysa garoonka diyaaradaha ee Sharm iyo Old City, ku dhowaad 10 daqiiqo ayaa midkiiba laga kaxeeyaa.
Microbuses ayaa kaa qaadi kara bartamaha magaalada, laakiin si aad u gaarto Na'ama Bay garoonka diyaaradaha, waa inaad raacdaa taksi.
Sharm el Sheikh wuxuu ku kordhay sadex meelood oo kala geddisan, Nabq waa aag cusub oo woqooyiga ka xiga Na'ama, Suuqa Hore iyo Haddaba koonfurta Na'amaa Bay.
Madaarka Sharm el-Sheikh. Madaarka ugu weyn Siinaay, wuxuu qaadaa diyaarado badan oo ah dalxiisayaal u kireysta maalin walba xilliga qaboobaha. Shirkadda ugu weyn ee duulimaadyada maxalliga ah waa EgyptAir. Waxaa jira 2 terminaal oo midba midka kale ka xigo. Terminal 1 waa midka cusub ee Egypt Air iyo Easy Jet. Waxaad u baahan doontaa fiiso kaliya haddii aad qorsheyneyso inaad ka baxdo aagga Sharm (sida baska Ras Mohammed ama doon, Qaahira, St Cathrines). Waa la iibsan karaa marka la yimaado (qiimaha ayaa u muuqda mid kala duwanaan kara maalinba maalinta ka dambeysa, hubi inaad haysato £ 15, US $ 15, ama € 15 oo anfac leh.
Bixitaannada: jadwalka jadwalka ayaa muujinaya kaliya 1-2 saacadood ee kuugu dhow, wuxuu kaa dhigayaa inaad kor ka ilaaliso safafka miisaska jeegga lambarka duulimaadkaaga.
Makhaayadaha ka dib hubinta amniga waa: Sbarro (ciriiri badan), Cafe Europa (dhinaca dambe ee qolka jiifka, oo aan aad u camiran): sandwiches, kafee, macmacaanka Masaarida; ka baxa Caffè Ritazza silsilad caalami ah oo dhowaan iman doonta (sidoo kale Athens, Budapest, Madrid, Milan, London, Paris, New York, Stockholm, Zurich, Vienna).
Dukaamada garoonka diyaaradaha
Hubinta amniga kadib: Dukaanka keega waxay bixisaa luqadaha, khalva iyo macmacaanka kale ee Masar.
Adeegyada doomaha u dhexeeya Hurghada ee dhul-weynaha Badda Cas iyo Sharm ayaa la joojiyay sannadka 2018. Catamaran-ka xawaaraha sare ku shaqeyn jiray waxaa maamuli jiray La Pespes.
Marsada Sharm El Sheikh wuxuu ku teedsan yahay wadada koonfureed ee laga soo galo, qiyaastii 1 km koonfur bari suuqa hore.
Baabuur ama bas
Sharm el-Sheikh waxaa lagu gaari karaa adiga oo kaxeynaya xeebta bari Eilat (Israel) iyada oo loo sii marayo Nuweiba iyo Dahab, ama loo maro marinka xeebta galbeed ee Qaahira. Waxaa jira basas maalinle ah oo loo maro labada wado. Laga soo bilaabo Qaahira, basaska East Delta waxay qaataan qiyaastii 8 saac (LE80) halka basaska Superjet ay qaataan 6 saac. Markaad baska ka raaceyso Qaahira, hayso tigidhka baskaaga iyo baasaboorkaaga mid fudud, maxaa yeelay waxaad ka gudbi doontaa dhowr isbaaro, oo looga baahan yahay rakaabka inay soo bandhigaan aqoonsi iyo tikidh. Wadiddu waa mid xiiso leh oo leh muuqaal qurux badan, dhammaan dariiqa.
Saldhigga basaska ee Sharm el-Sheikh wuxuu qiyaastii kiiloomitir u jiraa, wadada Nabadda. Haddii aad timaaddo inta lagu jiro saacadaha fiidkii ikhtiyaarkaaga keliya ayaa noqon kara inaad taksi qaadato, maxaa yeelay adeegga basaska yaryar ayaa dhibic leh. Maaddaama Sharm tahay dhaqaale dalxiis lagu dhaqaajiyo, waa inaad u diyaar garowdaa inaad xoogaa gorgortan ah samayso. Haddii aad ka mid tahay nooca socodka, wadada weyn waxay, qiyaastii, 20 daqiiqo u jirtaa wadada weyn. Kaliya weydii qofkasta inuu kuu tilmaamo dhanka wadada Nabadda. Mar alla markii aad timaaddo wadada Peace waa inaad wax dhibaato ah ku qabin inaad hoos u dhigto bas yar.
Markaad u socoto saldhigga baska ee loo maro baska yar ee loo maro Peace Road, u sheeg darawalka inaad aadeyso boosteejada baska, oo aad rabto inaad ku harto saldhigga gaaska. Tani waxay qaadan kartaa xoogaa shaqo ah, iyadoo la ogyahay xirfadaha Ingiriisiga ee wadayaasha darawalnimada ah. Mar alla markii aad tagto xarunta gaaska, waa inaad aragtaa basaska yar-yar, ee ku qaadi doona lugta ugu dambeysa. Xusuusnow, wareejinta lama bixinayo, waa inaad lacag kale ka bixisaa lugta ugu dambeysa.
Ku saabsan khidmadaha basaska yaryar Haddii safarkaagu u jiro kiiloomitir ama laba, kharashka waa inuu noqdaa (LE3-5). Haddii joogsigaagu sii dheeraado, ama haddii aad safreyso inta lagu jiro saacadaha dambe ee habeenkii, u diyaargarow inaad hesho dalab lacag badan, xaaladaha qaarkood darawallada ayaa dalban kara illaa (LE10-20). Dalbashada khidmadaha badan ayaa waliba dhici kara, haddii darawalku dareemo inuu lacag haysto! Marka, u diyaar garow inaad gorgortan gasho. Haddii khidmadda darawalku ay tahay mid aan caqli gal ahayn, ka bax - tani waxay badanaa hoos u dhigeysaa qiimaha. Markii aad timaadid, weydii maxalliga ah inta basku ku kaco intaadan midba hoos u soo dirin. Macluumaadka la bixiyay wuxuu ku siin doonaa qiimo saldhig-khad, oo aad ka gorgortami karto.
Sharm tagaasida guud ahaan waa moodooyin casri ah, Hyundai ama Chevrolet. Ha ku mashquulin mitirka taksiga: malaha mar dambe ma shaqeynayo. Si dhakhso leh ayey u jabaan ciidda darteed, waxayna ka shaqeyn doonaan wax ka badan sicirka "go'an" si kasta. Had iyo jeer ogow lambarka aqoonsiga darawalka. Booliska dalxiisku waa kuwa aad waxtar u leh haddii aad dhibaato qabto, ama aad si dhakhso leh u ogaato inaad wax uga tagtay gudaha, laakiin keliya lambarka taksiga.
Ha moodin inay mitir leeyihiin. Dadka deegaanka ayaa kuu sheegaya inaysan sameynin. Hubso inaad haysato gaadiid ku sugaya maaddaama garoonka diyaaradaha Sharm el Sheikh uu yahay qaybta ugu xun ee Masar helitaanka taksi qiimo jaban leh. Waxay weydiisan doonaan LE150-400 10-ka daqiiqo ee loogu raaco Nabq. Way fududahay inaad ka dhigto wadada weyn, soo dhaji cab oo bixi LE50-100. Haddii kale waad ka tegeysaa khibradda adoo dareemaya in lagugu xadgudbay. Ka hubi hudheelkaaga haddii ay leeyihiin adeeg soo qaad ah.
Hubso inaad haysatid qoraalo yar yar oo aad ku bixinaysid qiimaha oo waligaa ha bixin kahor intaadan gaarin meesha aad u socoto, adoo hubinaya inaad kaliya bixiso qiimaha horay loo sii qorsheeyay. Hubso in darawalku ogyahay inaad ku bixinayso lacagta Masar ee aadan bixinayn lacagta Ingiriiska. Tagaasida ma jecla inay qadaadiic qaataan.
Waxa kale oo jira raxan buluug iyo cadaan ah oo loo yaqaan 'tuk-tuks', kuwaas oo asal ahaan ah basas yaryar, oo leh kala-duwanaansho waddooyin oo kala duwan, kuwaas oo loo adeegsado in lagu kaxeeyo dadka deegaanka agagaarka loo dalxiis tago ee Sharm el Sheikh. Kuwani waa habka ugu dhaqaalo badan ee gaadiidka marka loo eego taksiyada, kuwaas oo isbarbardhigoodu qaali yahay. Waxay ku socdaan waddo go'an oo woqooyi ilaa koonfur ah iyada oo loo weecinayo ajaanibta / deegaanka maxalliga ah. Si aad u soo dhaweyso tuk-tuk, ku sug dhinaca dhinaca wadada weyn oo gacanta u taag si aad midba midka kale calanka ugu garaacdo markii ay soo dhowaatay. Markii aad baska raacdo, gudaha u gal oo raadi kursi oo si fudud lacagtaada ugu sii gudbi darawalka (adiga oo la kaashanaya rakaabka kale haddii aad dhabarka fadhiisato). Qiimaha tikidhadu waa inuusan ka badnaan LE3. Haddii aad bilowdo inaad weydiisato qiimaha darawalku wuxuu si fiican isku dayi karaa inuu kaa dhigo mid aad uga badan inta loo baahan yahay. Ha isku dayin inaad ku bixiso lacagta qalaad. Markaad timaado meeshaad u socoto wac 'hinna quiis' (halkan waa wanaagsan tahay). Xarunta dalxiiska ee ugu weyn, Naama Bay, waxaa loo yaqaan Marina (mana jirto marina!).
Hubso inaad haysatid qadaadiic yar oo lacag ah iyo qoraalo aad ku bixinaysid qiimahaaga.
Hoonbarrooyinka Na'ama Bay
Daawashada iyo dalxiisyada Sharm El Sheikh
Magaalada Sharm Old Kusoo dhawoow tagsi ama bas maxalli ah si uu kuu geeyo Magaalada Sharm Old, weydii darawalka suuqii hore. Tani waa khibrad aad u kala duwan oo loogu talagalay dalxiisayaasha jooga aagga Na'ama Bay. Inta badan Sharm waxaa la dhisay kadib duulaankii Israel, markaa ha filanin khibrad Morrocan ah 'souk'! Iska indha tirka touts ka baxsan dukaan kasta waxay ka dhigeysaa khibrad wanaagsan, inaad dhab ka tahay iibsiga mooyee. Ku adkee go'aankaaga waxa aad bixinayso.
Na'ama Bay waa xarunta dalxiiska ee Sharm el-Sheikh, muuqaal aan caadi aheyn oo xoogaa qalaad u ah reer galbeedka ayaa ah taageerayaal waawayn oo hawo nadiif ah iyo biyo u daadinaya makhaayadaha jidadka iyo teelasha u dhow hudheelada. Na'ama Bay aasaaskeedu waa dhisme weyn oo El-Sheikh / tiro hudheelo iyo isboorti ah, oo wadaagaya isla xeebta.
Masjidka Al-Mostafa, Wadada Al Rewaysat. Masaajidka ugu weyn magaalada Sharm el-Sheikh. Waxay leedahay dukaan yar oo leh buugaag Islaami ah, dalxiisyo ayaa la bixiyaa waqti ka waqti. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Masjidka Al Sahaba (Suuqa Hore). Kadib sanado la dhisayay, masaajidkan weyn ee ku yaal suuq duug ah ayaa la dhameystiray. Waxaa lagu dhisay qaab dhismeedkii Cusmaaniyiinta, si fudud ayaa loogu khaldami karaa inay halkaas joogtay boqollaal sano. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
El-Samayeey Cathedral. Kaniisad Coptic ah oo si qurux badan loogu qurxiyay sawirro muujinaya aayado kitaab ah. Badanaa, waxaa jiri doona hage bixin kara booqasho. (la cusbooneysiiyay Jul 2020)
Booqashada lamadegaanka ayaa aad loogu talinayaa. Safarro kala duwan oo loo tago Baadiyaha, quruxda midabbada leh ee quruxda badan, Caddaan Canyon, baaskiil afar geesle ah iyo safarro safari ah oo bajaaj leh.
Qofka xiisaha badan waa inuu isku dayaa inuu raadsado hage gaar ah, oo iyaga dhowr maalmood geeya geel buur ah. Waxaad dhex mari doontaa dooxooyinka qarsoon, waxaad ku nasan doontaa seeraha qarsoodiga ah iyo habeenkii waxaad ku seexan doontaa meel bannaan oo hawada sare ah.
Doomaha iyo snorkeling waxay u safrayaan dabaasha quruxda badan goobo ku yaal Beerta Qaranka ee Ras Mohammed iyo Jasiiradda Tiran. Kuwa aan dabaasha ahayn, doonta gujis ama doonta hoose ee dhalada ayaa ah bedel ku habboon oo lagu ogaan karo adduunka hoostiisa ee Badda Cas.
Dalxiisyada dhaqanka Sinai sida Monastery-ka Saint Catherine iyo Mount Sinai, halkaas oo, sida dhaqanku yahay, Ilaah la hadlay nebi Muuse. Dalxiisyo ka yimid Sharm el-Sheikh ilaa Qaahira, halkaasoo saddexda Ahraam ee caanka ah, Sphinx iyo Matxafka Qaranka ee Masar, ama Luxor, caasimadda caanka ah ee Masar hore. Dalxiisyada kale ee indha indheynta ah waxaa ka mid ah kuwa lagu tagayo waddamada deriska ah si ay u booqdaan goobo ay ka mid yihiin Petra ama Jerusalem.
Booqashada maalinlaha ah ee Dahab Safar raaxo leh oo raaxo leh - waa gebi ahaanba ka duwan Sharm. Hal saac u jirta waddo buuraleyda ah, ugu fiican oo aan la isku dayin habeenkii. Taksiyadu waa inay ahaadaan LE150 mar walba ama LE20 mar kasta oo laga raaco boosteejada baska ka dibna tagsi Dahab '(soo qaadid) LE5-10 oo magaalada soo gala. Qaado lambarka darawalkaaga haddii aad rabto inaad baxdo waqti kale. Buundadu waxay ku taallaa Bartamaha magaalada oo dhinac walba leh jiido.
Ku raaxayso aragtida iyo aragga iyo barnaamijka tooska ah Alf Lela w Lela (Kun iyo Kow habeen) maalin kasta. show-ga tooska ah waa mid cajaa’ib leh, oo leh bandhigyo kala duwan oo ay kujiraan qoob-ka-ciyaarayaal kale oo caloosha ku jira Sidoo kale aroosyada Masaarida qaarkood, tanourra qoob ka ciyaarka iyo bandhigyo. Xoogaa cidhib ah laakiin qiimeyn hareeraha ah.
Safarada gaagaaban ee Park-biyoodka, Baarkinka ugu weyn ee biyaha ee Sharm el-Sheikh, Dolphinella halkaas oo hoonbarfin lagu muujiyo iyo dabbaasha dolphin ay ka dhacdo iyo bandhiga yaxaaska.
Marinka Tiran iyo Jasiiradda Tiran
Quusitaanka waa hawsha ugu weyn ee Sharm el-Sheikh. Markaad ku dhex quusato biyaha diirran ee Badda Cas oo aad ka tagto lamadegaanka fog, waxaad geli doontaa adduun ka buuxa nolol iyo midabbo. Dadyowga kala duwan, gaar ahaan sawir qaadayaasha, waa inay ku kalsoonaadaan biyo-soo-saarkooda si looga fogaado inay waxyeello u geystaan ​​nidaamka jilicsan ee jilicsan Huteelada qaar ee ku yaal Na'ama Bay waxay ka nadiifiyeen xeebta qaybta xeebta ah dalxiisayaasha inay u isticmaalaan biyaha.
Reef of Daalim iyo Ras Maxamed waxaa loo yaqaanaa laba ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee quusitaanka adduunka. Doomaha ayaa looga raaci karaa Sharm laba saac gudahood. Ras Mohammed waa barta koonfureed ee ugu badan gacanka Siinay. Halkaas, xilligan gacanka Aqaba wuxuu la kulmayaa Gacanka Suweys. Kordhinta looxa loo yaqaan 'plankton' ee ku jira biyaha tirada kalluunku waa wax aan caadi ahayn. Iskuulada waaweyn ee barracudas, sharks iyo murrays ayaa halkaas lagu arki karaa maalin kasta.
Faa’iido darrada ay caan u tahay ayaa ah inaad ka heli karto ilaa 20 doonyood isla isla xeebta. Haddii aad raacdo doon maalinle ah waxaad ku raaxeysan kartaa quusitaankaaga iyadoo ay weheliyaan konton hagayaal kale oo quus ah iyo ilaa 10 nooc oo koox kasta ah.
Burburkii SS Thistlegorm waxaa guud ahaan loo arkaa inay tahay mid ka mid ah quusashada ugu wanaagsan adduunka. Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale noqon kartaa mid aad u fara badan oo leh noocyo kala duwan oo hubaal waa quusin horumarsan sababtoo ah mawjado xoog leh iyo qayb ka mid ah quusin inta badan waxay ku taal jawiga dusha sare.
Buugga kala duwan ee xariifka ah a safari quusin. Sidan ayaad uga fogaanaysaa dadka badan ee goobaha caanka ah waxaadna leedahay suurtogalnimada inaad ku quusto hareeraha quruxda badan ee ka baxsan meel kasta oo ay gaari karaan doomaha maalinlaha ah. Qiimaha guud ee safari quusitaanku kama badna quusitaanka maalinlaha ah wuxuuna kaa badbaadinayaa culeys badan. Ka fiiri doontaada aad dooratay khadka tooska ah oo hubi in sawirradu hadda yihiin!
Hawl wadeenada waxaa ka mid ah
Xarunta Quusitaanka ee Oonas. Xarun yar oo quusasho saaxiibtinimo leh oo ku taal dhammaadka xasilloon ee Na'ama Bay oo bixisa quusidda maalinlaha ah iyo dhammaan koorsooyinka PADI - qiimo dhimisyada tigidhada internetka.
Siinaa Quusiya Naama Bay.
Naadiga Quusitaanka Geela.
Kala Bixinta Colona.
Emperor Kala Duwan.
Kulliyadda Quusitaanka ee RedSea.
Ciidaha Quusitaanka Ugu Dambeeya.
Tuulada Sharks Bay Umbi.
Xarunta Quusitaanka ee Dolphin.
Kaladuwanaanta Caalamiga ah, Sofitel Hotel (Dhamaadka Waqooyi ee Na'ama Bay),. 9 AM-6PM. PADI Xarumaha quusitaanka shan xiddigood oo bixiya safarada quusidda maalinlaha ah, koorsooyinka PADI, iyo safari nool.
Xeryaha Hotel Sofitel. Shaqaale waxtar leh. U baahan koofiyadaha (la bixiyo); dhowr lamaane oo kabo fuushan ayaa la heli karaa. Raacitaanka ka dib, waxaad ku siisaa inaad siisid qubeyska faraskaaga. Bambi iyo Kelly waxaa lagu dhawaaqay inay yihiin fardaha ugu dhaqsaha badan. Aad uga fog lamadegaanka: dariiqa 2-saacada ah, kaliya 40 daqiiqadood ayaa dhab ahaan loo raacayaa lamadegaanka, waqtiga haray waxaa lagu qaatay in la tago iyo in lagu laabto. Muddo 2 saacadood ah, waxaa fiican in la doorto xeryo ku yaal cidhifka lamadegaanka. € 45 (2 saac) (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Waxa jira daraasiin hawl wadeyaal ah oo u muuqda inay adeegsanayaan isla waddo, dherer iyo isku xigxiga joogsiyada: markaad baabuur wado, waxaad la kulmaysaa kooxo badan oo raacaya isla dariiqaaga oo kale. Waxaa jira dhowr qaybood oo runtii gilgishay dariiqa, aadna ugu eg mashiinka wax lagu dhaqo.
Xidho shaati gacmo dheer; kabaha ayaa ka badbaado fiican kabaha. Had iyo jeer xiro koofiyad oo hubi in caymiskaaga socdaalku daboolayo hawshan. Filo dhammaan dharkaaga (iyo maqaarkaaga) inay ku dabooli doonaan boodh cawlan.
2 saacadood oo fuulitaanku waa kufilan yahay wadaha aan xirfada lahayn; filo dhowr joogsi intaad socoto. Waxay ku habboon tahay inaad safarkaaga ka bilowdo 4PM ama ka dib - si aad u qabato qorrax dhaca oo aad dib u raacdo markii hawadu aan kululayn.
Xilliga bixitaanka, dooro baaskiil bilowga mootada: ka mid noqoshada kuwa ugu horreeya waxay kuu oggolaaneysaa inaad si dhakhso leh u kaxeyso, natiijada ka dhashana siigo yar.
Tiba Safari / Tiba Safarka. Iibisay wakaalado badan. Kooxuhu waa 10-15 baaskiil; baaskiil laba qof ayaa loo oggol yahay (in kastoo baaskiilada loogu talagalay qof keliya). Dhadhaminta shaaha Berber aad ayey khatar ugu tahay calooshaada – dhowr jeer baa la caddeeyey. Kooxda waxaa weheliya gaari leh kamarad - fiidiyowgu ma mudna in la iibsado, baabuurkuna wuxuu soo saaraa boodh badan oo dheeri ah (wax badan kama qaban kartid haddii kooxdaada oo dhami ay horay u weydiistaan ​​mooyee inaynan fiidiyoow samayn). US $ 20 qofkiiba hal baaskiil 2 saac; $ 25 laba qof oo isla baaskiil wadaagaya 2 saac. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hubso inaad ku sii socoto wadada oo aad raacdo hagahaaga, maadaama Masar ay ku jirto rubuc ka mid ah miinooyinka adduunka ee lagu aasay lamadegaankeeda, qaar ka mid ah si la yaab leh ayaa ugu dhow Sharm el-Sheikh.
Para shiraaca waa wax lagu farxo. Laakiin, raacitaan kayar 5 daqiiqo, waxay ka qaadaan LE260 2 qof iyo hal qof LE220.
Meesha ugu fiican ee tan lagu sameeyo waa saxaraha Siinay oo geel lagu dalxiis tago. Intaas ka dib waxaad kor u eegi kartaa xiddigaha lamadegaanka saqbadhkii ka dib markii aad cunto guriga ku samaysay ay karsadaan dadka Siinay.
Biyaha dukaamada ku kacaya qiyaastii LE3-5. Soo qaado muraayaddaada qorraxda, maxaa yeelay waxay ku kacayaan LE80-200 meel kasta oo magaalada ka mid ah, haddii aanad lahayn tan, dukaanleydu wuxuu kaa iibin doonaa mid qiimo aad u xun - ku soo dhowow Masar.
Na'ama Bay waxay leedahay iibiyeyaal xoog leh oo taxaddar leh waa inay qaataan dalxiislaha caqliga badan ee aqbala "hadiyad bilaash ah" (Masarna wax bilaash ah kuma jiraan) ama u dhici kara "kaalay oo saxeex buuggayga martida" dukaan, kaliya waa la xirayaa Marka aad wax iibsaneysid, waxaa fiican inaadan la hadlin wax iibiyeyaal ah oo ku mashquuliya inaad ka hubsato inaad wax iibsaneyso mooyee. Tani waxay kuu oggolaaneysaa xoogaa xoogaa socod ah oo aan dhib lahayn (maadaama aysan aqoon luqadda aad ku hadasho).
Saacadaha ay furan yihiin way kala duwan yihiin, laakiin dukaamada badankood waxay furan yihiin galinka hore ilaa galabtii iyo galabtii. Haddii aad raadineyso dib u dhac ka yimaada dhibaatada iyo soo noqnoqoshada, waxaa ku yaal Supermarket Carrefour Express oo leh qiimo go'an. Ka imanaya baarka, wuxuu ku qarsoon yahay dhabarka mid ka mid ah Xarumaha Ganacsi, ee Dahabka Ahraamta Mall - Wadada Nabadda. Xulku waa xaddidan yahay, laakiin dhammaan waxyaabaha la geeyo ayaa la heli karaa iyada oo aan dhib la helin. Kaliya waa inaad ka dhex sameysaa dad badan oo ka mid ah iibiyaasha iibka si aad halkaas u tagto.
Carrefour Express, Marina, hal waddo oo dhanka galbeed ka xigta 'diskooga weyn' (hal waddo oo ka baxsan waddada weyn ee laga dukaameysto / xanaaqa badan ee qeybta Marina). Mid ka mid ah dukaamada caanka ah ee yurubiyanka ah oo leh astaamo qiimo leh, ikhtiyaar ah in lagu bixiyo kaarka deynta oo aan lahayn qasaarooyin, mashiinka sarifka iyo ATM gudaha. Waxay leeyihiin dhir udgoon badan oo deegaanka ah iyo xitaa waxyaabo xusuus ah, sida papyrus yar oo kaliya loogu talagalay LE2.
Haddii aad u baahato inaad ka nasato cuntada dalxiiska isku day mid ka mid ah meelaha xalaasha ah ee hoose. Haddii aad raadineyso dhadhan guri, Il Mercato waxay leedahay McDonald's, KFC, Pizza Hut, Costa iyo Starbucks. Manchow Wok wuxuu leeyahay cunno shiineys ah oo fiican wuxuuna ka soo horjeedaa Stella, meesha kaliya ee laga cabo El Mercato.
Na'ama Bay waa madadaalo, gaar ahaan habeenkii, halkaas oo laydhadh u eg Baadiyaha iyo makhaayado casri ah, meherado laga qaxweeyo, iyo 'bajaajooyin' kale ay dhalaalayaan. Lacag dhan 10-15% ayaa lagu dari doonaa biil kasta.
El Masrien, Old Market (oo ku xigta bixitaanka suuqa),. Duhur – 4AM. Bixinta cunnooyinka cunnooyinka masar ee Masar oo ay ku jiraan Kabab, Kofta, Reyash, Nefa, Tarab & beerka, dhammaan noocyada kala duwan ee cuntooyinka bariga oo ay ka mid yihiin shank hilib, xamaam cufan & duck cufan, dhammaan noocyada baastada & bariiska & noocyada kala duwan ee khudradda cufan. Aalkolo la'aan. Ku raaxayso dhammaan noocyada kala-duwanaanta rootida. Sidoo kale waa u qalantaa GAD dhawr albaab oo kale, hoos ka raadi calaamadda weyn ee cas. Labaduba waxaa ka buuxa dadka deegaanka.
Qiimaha cuntada badda (In Horus Mall),. Dhammaan noocyada kala duwan ee cuntada badda ee laga helo Badda Cas.
Cafe Fawanes, Naama Bay. Cunnada Lubnaan. Meel wanaagsan oo loogu talagalay dhuumaha biyaha; mid ka yar dalb (Fawanes); tufaaxa mid ayaa haboon.
Basasha (In Iberotel IL Mercato). Fusion food, adeegyo wanaagsan iyo qiimo macquul ah.
Safsafa, Naama Bay ,. Malaha mid ka mid ah makhaayadaha kalluunka ugu fiican magaalada. Meel dhif ah oo xasilloonida la dubay ay runtii wanaagsan tahay. Si kastaba ha noqotee, aargoosatada ku jirta saxanka cuntada badda ee isku dhafan ayaa qallalan.
Kafee Tempo. Waxay muujineysaa boqolkiiba qaar ka mid ah dadka deegaanka. Waitarayaashu waxay ku labisan yihiin liin-cagaar-cagaaran oo gaar ah. Biibiile way fiican tahay, laakiin markii loo adeego dhowr qof (oo leh tuubbooyin fara badan), sicirka menu-ka waxaa lagu dhufan karaa tirada dadka – horay u sii weydii; malaha waa uun khiyaamo.
Makhaayadaha Hindida. Sharm waxaa ku yaal 3 maqaaxiyo Hindi ah. Mid waa Maharaja, wadada xeebta. Labada kale waa Makhaayadaha Guryaha Hindiya, ee hudheelada Thai Chain. Mid waa suuqii hore iyo mid kale, kana soo horjeedka Buddha yar, wadada u dhow istaaga tagaasida. Waad heli kartaa liiska cuntada Hindida.
Casiirka cusub ee 'Guava juice' waa mid isku day ah, oo aad ugu fiican makhaayad walba, oo ay weheliyaan Baadiyaha ama shaaha miiska.
Halkee lagu joogayaa Sharm el-Sheikh
Inta badan hudheelada ku yaal Sharm, gaar ahaan nawaaxiga Na'ama Bay waxaa loogu talagalay dalxiisayaasha xirmooyinka. Waxaa jira inta badan 3-6 xiddigood hudheello loo wada dhan yahay oo aad ayey u yar yihiin (haddii ay jiraan) xulashooyinka miisaaniyadda. Guud ahaan waxaa ugu wanaagsan in xiddig laga rido darajada rasmiga ah si looga fogaado niyad jab. Kireynta guryaha gaarka loo leeyahay waa dhaqaale, laakiin wey ku kala duwan yihiin xarumaha.
Nabq ama aagga Montaza waa masaafo aad u fog woqooyi (12 km) marka laga yimaado Na'ama Bay iyo Old Market, marka adigu waxaad kuxirantahay raashinkooda oo dhan, ama waxaad ubaahantahay inaad taksi kubixiso casho kasto oo Naama ah. (in kasta oo tagaasidu ka jaban tahay hudheelada badankood, ama raac hudheelka basas sharaf leh). Waxaad ku leedahay Soho Square iyo 'Mall Strip' ee aagga Nabq dhammaan hudheelada loo dhan yahay.
Hoteellada ku yaal Na'ama Bay, dhulkooda waxaa badanaa ka gudba waddo lugeynaya, marka xeebta waxaa laga yaabaa inay ka muuqato hareeraha waddada dhismaha hoteelka – taas oo si muuqata u saameynaysa asturnaanta xitaa marka la isticmaalayo barkadda hoteelka. Isgoysyada zebra ee jidadka waa weyn ayaa la iska indhatiraa maadaama darawallada aysan wax fikrad ah ka haysan waxa ay yihiin! Xusuusnow inaad ka hubiso xulashadaada khariidadaha Google si aad u aragto inay runti u dhowdahay xeeb maaddaama qaarkood laga soo celiyo biyaha masaafada qaar, in kastoo ay leeyihiin basas lagu raaco (qaar ka mid ah oo laga qaado khidmadaha maxalliga ah).
Maritim Jolie Ville Golf & Dalxiis,. Hoteelku wuxuu leeyahay koorsada golf-ka caalamiga ah ee 18-god ee PGA golf ee aagga (Ku guuleystaha Abaalmarinta Safarka ee 'Platinum MENA' ee loogu talagalay Naadiga Golf-ka ee ugu Fiican Bariga Dhexe & Afrika 2006). (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Naadiga Quusitaanka Oonas, Na'ama Bay,. Hoteel yar oo madaxbanaan oo ku yaal xeebta dhinaceeda aamuska badan ee Na'ama Bay. Iyada oo leh maqaaxiyo isku dhafan iyo tas-hiilaad baarka, baarka saqafka iyo Xarunta Dive Center. Shaqaalaha saaxiibtinimo iyo adeeg shaqsiyeed.
Savoy. Qolal aad u waasac ah oo casri ah.
Sierra. Dhul aad u yar tiradiisa dadka soo booqda. Gegada diyaaraduhu aad ayey isugu dhow yihiin, diyaaradihuna waxay dul maraan dhulka hudheelka.
Sofitel. Dhul ballaadhan ayaa go'doonsan oo gaar loo leeyahay, laakiin weli masaafad u jirta Naama Bay –oo u oggolaanaysa wacyigelin wanaagsan oo loo maro wadiiqooyin ubax ah oo Naama Bay casho loogu sameeyo. Qurxinta iyo qaabdhismeedka qaab-dhismeedka Marooko; soohdintu waxay ku foognayd ubaxyo. Shaqaale edeb leh – marka la barbar dhigo goobo dalxiis oo kale oo badan oo fasal ah oo ku yaal Sharm. Waxaa la dhisay qiyaastii 80s-90s hore, sida qalabka musqulaha ka muuqata; kuraasta balaastigga ah ee dabaqyada gaarka loo leeyahay. Berkad weyn oo lagu dabaasho, maxkamadda tennis-ka (lacagta nalalka korantada oo keliya ayaa la bixiyaa?), Goob jimicsi, xero faras oo la heli karo 3 xeebo gaar ah, mid kasta oo leh qayb gaar ah oo xeeb xeebeed u dhow xeebta. Quraacdu waa laga bilaabo 6:30 AM-10:30AM; buffetka dib looma buuxin 10AM kadib. Xulasho wanaagsan oo ah quraacda dhaqanka; omlettes si gaar ah loo sameeyey iyo ukunta la shiilay; kafee waa Mareykan kaliya; kookaha waxaa loo sameeyaa si deg deg ah. Miraha oo dhan looma adeego, laakiin dhammaan qaybaha saladhka miraha ayaa ah. Barta Horizon waxay dulmartay badda; dabaqyada ku ag yaal barkadda ayaa labaduba ka cunaan suxuunta makhaayada weyn ee quraacda laga bixiyo. Kaysar salad waa fiican yahay; maraqa lentil ma aha basbaas iyo quruxsan (haddii aad jeceshahay maraq digir). Pizzas waa wax caag ah. Maraq qajaar qabow iyo yaab leh. Waxa kale oo jira makhaayad Hindi ah.
Domina Oasis Hotel & Dalxiis (agagaarka Sharm El Sheikh Golf Resort).
Grand Rotana Resort & Spa. Qiyaastii toban daqiiqo garoonka diyaaradaha.
Hilton Sharm Dreams Resort, Nabq (oo u dhow Nabq Bay). Qolalka martidu waxay leeyihiin balakoonno, qaboojiye, iyo sariiraha fadhiga. Qolalka waxaa sidoo kale ku jira baararka yaryar iyo qubeyska gacanta. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hilton Fayrouz Resort Sharm El Sheikh (agagaarka Naama Bay Beach).
Hilton Sharks Bay Sharm El Sheikh (agagaarka Sharks Bay).
Hyatt Regency Sharm El Sheikh, Gardens Bay, Koonfurta Siinaay ,. 5 -huteel oo ah nooca hudheelka hudheelka oo leh 439 qol iyo suuliyo, Xarunta biyaha iyo isboorti.
Marriott Sharm El Sheikh Resort (agagaarka Naama Bay Beach).
Dalxiiska Noria (agagaarka Naama Bay Beach). Waxaa loo dhisay qaab dhaqameed Roman ah. Ma ahan xeebta laakiin waxay leedahay bas bas bilaash ah. Waxay ka qaadaan € 3 saacadiiba wifi.
Sheraton Sharm Hotel, Dalxiis, Villas & Spa (agagaarka Sharm El Sheikh Golf Resort),.
Kaliya Shanta Xiddigood Plus meelaha loo dalxiis tago waa:
Afar Xilli Dalxiis Sharm El Sheikh, 1 Afar Xilli Boulevard ,.
Ritz Carlton. Dalxiis, quusid iyo huuri hudheelka.
Uruurinta Dalxiiska Dalxiiska ee Cleopatra,, fax: +20 69 37 10 851. Dalxiis, quusid iyo huuri hudheelka. EGP 444 HB.
Jaz Belvedere Resort Hotel, El Montaza ,.
Xeebta Jaz Mirabel (Hotelka Sharm El Sheikh), Nabq Bay ,. az Mirabel Beach waxay bixisaa aragtiyo cajaa'ib leh oo ku saabsan Badda Cas oo ah meel raaxo leh laakiin raaxo leh oo saaxiibtinimo leh oo loogu talagalay xirmooyinka ciidaha ee Masar. Xeebta Jaz Mirabel waxay ku taal xeebta harada ee Nabq Bay, oo toban daqiiqo u jirta garoonka diyaaradaha ee Sharm El-Sheikh.
Mount Sinai - waa buur barakaysan oo loo yaqaan kuwii hore Kaniisadda St. Catherine, oo loo maleeyay inuu yahay buurtii uu Muuse ka helay 10ka amar. Taksi maalmaha ku sugaya waa lagaa heli karaa haddii aad rabto inaad raacdo maalinta. Haddii aad rabto inaad u dhacdo qorrax dhaca ama qorrax ka soo baxa waxaad ka dalban kartaa safar adigoo u maraya mid ka mid ah hawl wadeenada deegaanka. Calaamadee in kafateeriyada ku taal Monastery aysan had iyo jeer lahayn cunto, laakiin ay u baahan tahay jajabyo iyo cunto fudud. Xikmad baa ku jirta inaad xoogaa cunto ah keento haddii aan laguu diyaarin qayb ka mid ah safarkaaga.
Dahab - waa magaalo dalxiis oo yar oo nasasho ah 90 km waqooyi ka jirta Sharm El Sheikh, wax ka yar hal saac, waxay bixisaa noocyo badan oo isboortiga biyaha dabaysha ah iyo sidoo kale kuwa caanka ah Godka Buluugga ah.
Taba Heights - ujeeddo ayaa loo dhisay magaalada loo dalxiis tago ee 225 km woqooyi, in ka yar 2 saacadood oo wadis ah, oo bixisa noocyo badan oo isboortiga biyaha dabaysha ah iyo sidoo kale fursad lagu arko kalluunka rahyada iyo fardaha badda.
NEOM Magaalada Sucuudiga
Dalxiiska Al Diwan Sharm El Sheikh
Tuulada Amar Sina Sharm El Sheikh
Amwaj Oyoun Hotel & Resort Sharm El Sheik
Domina Coral Bay Oasis Hotel & Resort Sharm El Sheikh
Hotel Domina & Dalxiis Aquamarine Sharm El Sheikh
Hotel Domina & Dalxiis El Sultan Sharm El Sheikh
Hotel Domina & Dalxiis Harem Sharm El Sheikh
Domina Hotel & Resort Kings Lake
Domina Prestige Coral Bay Sharm El Sheikh Hotel
Afar Xilli Dalxiis Sharm El Sheikh
Gardenia Plaza Hotel & Resort Sharm El Sheikh
Grand Rotana Resort & Spa Koonfurta Sinai
Dalxiiska Hilton Sharks Bay
Dalxiiska Hilton Sharm
Iberotel Club Fanara Hotel Sharm El Sheikh
Iberotel Fanara Residance Sharm El Sheikh
Iberotel Liido Hotel Sharm El Sheikh
Kiroseiz Saddex geesood Dalxiis Sharm El Sheikh
Logaina Sharm Resort Sharks Bay
Maritim Jolie Ville Golf & Dalxiis Sharm El Sheikh
Melia Siinaay Hotel Sharm El Sheikh
Meel Dalxiis oo loo yaqaan 'Mexicana Sharm Resort'
Hotelka Ocean Club Sharm El Sheikh
Park Inn Waxaa qoray Radisson Sharm El Sheikh Resort
Iskaashatada Hotel Turquoise Sharm El Sheikh
Partner Sunset Hotel Sharm El Sheikh
Rehana Royal Beach Resort & Spa Sharm El Sheikh
Ritz Carlton Resort Sharm El Sheikh
Dalxiiska Sharm El Sheikh Marriott
Sheraton Sharm Hotel Resort & Villas Sharm El Sheikh
Hotel Sol Cyrene Sharm El Sheikh
Hotel Sol Verginia Sharm El Sheikh
Sol Y Mar Sharming Inn Sharm El Sheikh
Dalxiiska Xeebta Sonesta Sharm El Sheikh
Sunrise Tirana Aqua Park Resort Sharm El Sheikh
eHalal Safarka Mart > Safarka Masar Xalaal > Tilmaamaha Safarka Sharm-el-Sheikh
Holiday Inn Toronto Xarunta Magaalada	   
Hagaha Socdaalka Münster Xalaal